Ciidamada gumaysiga ee nacabka ah oo dad shacab ah tuulaad Shenniile ku xidhxidhay.
Dec 26, 2012 (QOL) War gudaha Ogaadeenya goor dhaweyd naga soo gaadhay ayaa sheegaya dad shacab ah oo Askarta bahaloobay ee Tigreegu ay xabsi u taxaabeen, dadkan oo aan waxba galabsanin waxaa lagu xidhxidhay Tuulada Shinniile oo Degmada Dhanaan katirsan.
Wariye Darwiish Macalin oo ka mid ah hawlwadeenada Qorahay Media ee gudaha Ogaadeenya ku sugan ayaa loo xaqiijiyay xidhayga dadkaas oo tiradoodu dhantahay 7 ruux islamarkaasna si aad ah loo waxyeelleeyay, dadlkan shacabka ah oo wax dhibaato ah aan cidna u gaysanin ayuu xidhaygoodu ka mid yahay xadgudubyada aan kala joogsiga lahayn ee shacabka Ogaadeenya ay marwalba ciidamada naacabka ah ee Tigreega kala kulmaan.
Sida uu ku warku tibaaxayo maalmo ka hor ayay ciidanka Gumaysiga ee magaalada Dhaanan ku sugan waxay shacabka deegaankaas ku amreen in ay keenaan ciidan la doonayo in wiilasha Tigreega xabada looga dhigo arintaas ayaa la sheeagyaa in aysan shacabku dhag jalaq u siinin qaarkoodna ay si cad uga hor yimaadeen.
Gumaysiga daalan ee gabalkiisii sii dhacayo ayaa ku fashilmay dagaalda uu kula jiro geesiyaasha Ciiddanka Waddaniga Xoreynta Ogaadeenya wuxuuna ku guuldaraystay isku day walba oo uu ku talo galay in uu shacabka Ogaadeenya ku nugleeyo halganka xaqa ah ee xorayta Ogaadeenya loogu jirana uu kaga xidhiidh furo balse waxaa sii kordhaya guuldarada gumaysiga & fashilka ku imanaya qorsheyoga shacabka Ogaadeenya ka dhanka ah.
Hadaba dadka Shinniile lagu xidh xidhay waxay kalayihiin.
1-Haadi Macalin Bashiir
2-Xassan Macalin Rashiid
3-Maxamed Xassan Kayd
4-Cabdullahi Maxamed Kaydsane
6-Ilyaas oo aanan ina ayihiisa helin
& nin kale oo magiciisu uusan wali nasoo gaadhin. Si kastaba ha ahaatee ciidanka mooraal jabsan ee gumaysiga ayaa marwalba ku gadooda kana aar goosta dadka nugulka ah ee aan hubaysnayn waxayna u gaystaan tacadiyo aan la soo koobi karin, shacabka Ogaadeenya ee dulqaadka badan ayaa u dhabar adayga waxyeellooyinka gumaysiga waana sababta uu halganka Ogaadeenya marba marka ka damabysa kor ugu sii kacayo. Dadka shacabka ah ee Shinniile lagu xidhxidhay & guud aahaan xaaladaha kala duwan ee Ogaadeenya wixii ka soo kordha wararka dambe kaga bogo Insha Allah.